Usuku Lokuzalwa Oluhle ｜ Sinocare Anniversary-19-News-Sinocare
Usuku Lokuzalwa Oluhle ｜ Sinocare Anniversary ye-19
Isikhathi: 2021-08-10 Hits: 37
Ngo-Agasti 7, 2021, ukuqala kwekwindla, uphawu lwethemba nokuvunwa kwe-mpintsha, futhi kwaletha neminyaka emithathu kweminyaka engu-19 yokuzalwa, emithathu enyakatho "ngokwenza nasekuhlonipheni izethembiso ezingakuthanda," isikhumbuzo se-19 Yosuku lwesihloko se-SiQing ekomkhulu lalo e-changsha, ehhovisi ngalinye abangane nabo inhliziyo inabantu abathathu, ngokubuka ifomu elibukhoma, nabo bonke abathathu ukuchitha isikhathi sekhwalithi ndawonye.
Ngehora lesishiyagalolunye ekuseni, usuku olukhumbulekayo lwaqala ngokucula okumnandi kwendlunkulu kanye namahhovisi angaphandle. Yebo.
Umsebenzi wepaki wasendlunkulu obulindelwe kakhulu uyeza! Indawo enkulu ihlanganisa izakhiwo eziningi, futhi kwathengiswa amathikithi ayigugu angama-240 ngaso leso sikhathi! Abathwebuli bezithombe abangochwepheshe balandela wonke umcimbi!
Buka izinsizwa zincintisana ngamaqembu ukuthola nokuqoqa izinhlobo eziyi-16 zonodoli abamele inhlalakahle yabasebenzi efihlwe phansi! Kulo mdlalo, noma ngubani othwebula isithombe nesisebenzi esidala esijoyine inkampani ngaphambi kuka-2010 angahle ahlenge ngokushesha isahluko sendawo yonke. Masigijime, sisebenzisane, sixhumane futhi sithinte kaninginingi, bese Thola injabulo encane ifihlwe phansi!
Injabulo isho izwe elinokuthula nabantu abaphephile, ukusheshe kuqedwe lo bhubhane, futhi kungabe kusaba yisikhukhula esinamandla. Injabulo isho ukulwela ukubona ushintsho kuzo zonke izigaba, ukubamba amathuba okungenamkhawulo wobuhle, nokuvuna ngemuva kokusebenza kanzima. Kusho ukuthi nomaphi lapho uya khona, kunabantu abakukhathalelayo, abakuthandayo nabakuphelezelayo, futhi yonke le njabulo ingatholakala eSanpromise.
Ikhasi Langaphambili: None
Ikhasi elilandelayo: Yamukela iNxusa lase-Uganda eChina ukuvakashela iSinocare